Njem Nleta India Na -eme Ihe Niile Site na Nkiri, Egwuregwu, Okpukpe, Nkwụsị, Ọrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Njem Nleta India Na -eme Ihe Niile Site na Nkiri, Egwuregwu, Okpukpe, Nkwụsị, Ọrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ememe njem nlegharị anya nke India
Onye minista minista nke gọọmentị nke Uttarakhand, Satpal Maharaj, kwuru taa na gọọmentị steeti agbatịla enyemaka ego na ego dị iche iche na mpaghara njem nlegharị anya wee mee ọtụtụ usoro iji nyere ya aka.
Emebela ngwugwu INR 200 crores maka ndị na-eweta ọrụ metụtara COVID dị ka ndị na-eme njem nlegharị anya na ndị ndu osimiri, n'etiti ndị ọzọ.
A na -eme atụmatụ na mpaghara India niile ịtụte njem nlegharị anya site n'ụdị dị iche iche dịka ihe nkiri na egwuregwu, okpukperechi na ebe obibi na ọrụ.
Onye isi oche FICCI kwuru na njem, njem nlegharị anya na ile ọbịa bụ ndị mbụ tara ahụhụ ma eleghị anya ọ ga -abụ ndị ikpeazụ ga -agbake.
Na-agwa nnọkọ Valedictory nke njem nke abụọ, njem nlegharị anya & ile ọbịa e-Kpọsa: Resilience & Thezọ mgbake nke FICCI haziri, Maazị Maharaj, onye minista na-ahụ maka ịkọ mmiri, njikwa idei mmiri, obere mmiri mmiri, owuwe ihe ubi mmiri ozuzo, njikwa mmiri, Indo- Mmemme Osimiri Nepal Uttarakhand, njem nlegharị anya, njem nsọ na ihe ngosi okpukpe, ọdịbendị, kwuru na steeti emebela iwu dị iche iche iji nyere ngalaba ahụ aka ịtụte.
“N'ime amụma na enyemaka dị iche iche nke steeti mere, steeti na -enye amụma iji dọta ma kwado ụlọ ọrụ ihe nkiri gbaa n'ime Uttarakhand. Na mgbakwunye, anyị enyela enyemaka nke INR 10 lakhs na mbara oke ugwu yana INR 7.5 lakhs n'ọzara n'okpuru Deendayal Homestay Yojana. Edebanyela aha ụlọ obibi 3,400 ugbu a n'okpuru atụmatụ a, ”ka o kwuru.
Ọzọkwa, na -ekwu maka ihe ọhụrụ na njem nlegharị anyaMaazị Maharaj kwuru na ndị mmadụ na -atụkwa anya ugbu a ịnọ n'ụlọ na ịrụ ọrụ. "N'okpuru Veer Chandra Singh Garhwali Yojana, anyị amalitela ndebanye aha n'ịntanetị. Anyị arụpụtala sekit dị iche iche iji bulie njem ime obodo, ”ka o kwuru.